Ny halavan'ny sandan'ny crank no tokony ampiasaiko? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Ny halavan'ny sandan'ny tànana - vahaolana mety
Ny halavan'ny sandan'ny tànana - vahaolana mety
Ny halavan'ny sandan'ny crank no tokony ampiasaiko?
Ny fihodinan'ny fihetsiketsehana dia miankina amin'ny femur, tibia ary tongotrahalavan'ny, izay miovaova (matetika) raha oharina amin'ny halavanao. Ka amin'ny teny tsotra ary eritreretina fa mitovy daholo ny refy ananantsika rehetraafaka mampiasany 172.5mm antsikacranksary ny haavon'ny 1,778m hanorotokony ho lava halavan'nyho 9,7% amin'ny haavontsika.
Ny halavan'ny volo dia lafiny iray amin'ny bisikiletantsika izay tsy dia jerentsika matetika. Raha ny marina dia tena mety ho maro aminareo no tsy mahalala akory ny halavan'ny bisikiletan'ny bisikiletanao. Ary azo takarina izany, satria tianay ny mitaingina izay mifanaraka amin'ny bisikileta amin'ny voalohany.
Na izany aza, ny halavan'ny crank dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba mahomby amin'ny famokarana herin'ny pedal. Azo iadian-kevitra ihany koa fa ny iray amin'ireo antony manandanja indrindra amin'ny fampitaovana bisikileta ahazoana aina sy mahomby dia ny halavan'ny lavaka, ohatra.
vehivavy mitsidika an'i de france
B. ao ambadiky ny mazava dia milaza ny haavon'ny laselintsika isika. Ary na izany aza, maro aminareo no mety tsy mahalala akory fa samy hafa ny halavan'ny cranks.
Ka angamba tokony hitandrina kokoa isika. Ary anio aho dia hiresaka ny antony mahatonga ny fanafohezana ny cranks hataontsika ho zava-dehibe ary hijery ny tombony azo avy amin'ny crankset fohy kokoa amin'ny bisikiletanao. (Hira fifaliana) Avy eo andao aloha hanomboka amin'ny fototra.
Ny halavan'ny volo dia refesina avy eo afovoan'ny axe pedal mankany afovoan'ny boribory fonosana ambany eto. Ankehitriny ireo dia tonga amin'ny haben'ny 160 mils fotsiny ary afaka miakatra hatramin'ny 185 mils. Saingy raha ny marina dia ao anaty tarika tery izy ireo eo anelanelan'ny 170 sy 175 mils, ary mitombo hatrany amin'ny 2,5 mil.
Ka raha maka ny salan'isa an'io tarika tery io isika dia 172,5 mils, izany no salan'isa amin'ny ankamaroan'ny bisikileta amidy eto UK izay mety amin'ny lehilahy salantsalany UK, raha 5 metatra 10 na 177 'centimetatra izany amin'ny teny tsotra mifandanja. azontsika atao ny mamintina fa ny halavan'ny volontsika dia mety ho 9,7% amin'ny haavontsika.
Raha ampiasainay ho toy ny torolàlana izany ary averintsika ny refin'ny halavan'ny tongotra eo amin'ny halavanao, dia azontsika atao ny miova fa ny lavan'ny lavaka dia mety hiova arakaraka ny halavanao, kanefa, mifandraika amin'ilay crank mahazatra nolazaiko tamin'ny 172.5, ny fenitra amin'ny bisikileta saika rehetra, manomboka amin'ny frame 58-centimetatra ka hatramin'ny frame 52-centimetatra, miaraka amin'ny zavatra toy ny crank 165 milimetatra mety ho hita amin'ny bisikileta vavy tena kely dia hitantsika fa ny indostrian'ny bisikileta dia mety niraikitra teo aloha, ary raha ny tena izy dia maro amintsika no mitaingina cranks izay mety lava loatra ny mitaingina ny vatantsika, inona no tombony azontsika antenaina amin'ny fanafohezana ny vatantsika? Izay, voalohany indrindra, ny ankamaroan'ny mpitaingin-tsoavaly dia mahita fampiononana amin'ny ankapobeny avy amin'ny crank fohy kokoa, ary mazàna amin'ny fanafohezana ny vatantsika dia mazàna misy kapoka pedal mahery kokoa matanjaka kokoa avy amin'ny crank ary manatsara ny fampiononana ihany koa. Eny tokoa, ity dia toerana tsara hanasongadinana fa ny lavan'ny lavaka dia tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny zava-bitantsika.
Raha tsy mitaingina boaty tokana ianao, ny halavan'ny volo na ny halavan'ny lavaka dia hanampy amin'ny famokarana tady bebe kokoa. Saingy eto no miditra ny kodiarana, ary afaka manonitra ny fiatraikany izay mety hateraky ny halavan'ny levera, izay crank antsika. Tena tsy fantatro izay triathletes mihazakazaka amin'ny bisikileta bisikileta.
Raha ny marina, ny fanatsarana ny faritry ny valahana no tombony lehibe azo avy amin'ny cranks fohy kokoa amin'ny latabatra. Ny vokatry ny halavan'ny volo dia eo an-tampon'ny torotoro amin'ny pedal na amin'ny toeran'ny 12 rehefa tsapa amin'ny lohalika tery indrindra ny lohalintsika, ary noho izany ny vokany dia ny fohy kokoa ny mpitaingina na ny lava lava ny volo, ny lohalika tsy maintsy miondrika. Amin'ny alàlan'ny default, ny fohy kokoa ny mpamily ary ny lava ny volo, ny kely kokoa dia fitambarana mety tsara ho an'ny elanelan'ny fihetsiky ny valahantsika.
Ny squats bebe kokoa dia midika fa ny mety hisian'ny fanaintainan'ny lohalika, ny fihenan'ny valahana, ary na dia ny fanaintainana ambany kokoa aza. Ary koa, rehefa mihamafy ny zoro hip, dia vao mainka sarotra ny famokarana ny zava-bita tampontsika. arakaraky ny halavan'ny crank no mahabe ny fahafahantsika manana teboka maty amin'ny dia an-tongotra eo anelanelan'ny 11 ora sy 2 maraina.
Ankehitriny, tombony hafa iray amin'ireo cranks fohy kokoa izay eken'ny triathletes maro ankehitriny ny zava-misy fa afaka manana an'io isika satria ny crank fohy kokoa dia mamela antsika hahatratra ny toerana ambany torso misy antsika satria ny valahantsika dia eo amin'ny zoro misokatra kokoa noho ireo cranks fohy kokoa ireo. Ny haavon'ny laselintsika dia matetika miankina amin'ny fanitarana tongotra faran'izay lehibe ananantsika any amin'ny faran'ny farany ny dia an-tongotra. Ka ny cranks fohy dia midika fa tsy manana fanitarana firy isika amin'ny vola anaovantsika ny volantsika.
Antenaina fa izany dia azonao fa takatrao fa tsy maintsy manonitra ny fanafohezana ny cranksantsika isika amin'ny fampitomboana ny haavon'ny lasely amin'ny isa mitovy. Na izany aza, ny haavon'ny lasely tsara indrindra dia milatsaka amin'ny toerana mamy na varavarankely tery izay mety ho somary avo loatra na ambany kely loatra. Manantena aho fa nahita io toerana mamy io ianao tamin'ny alàlan'ny fitsapana sy hadisoana na fitondra bisikileta mety.
Ary ny vintana dia tsy mila manova ny haavon'ny laselyo ianao amin'ny voalohany satria eo amin'ilay varavarankely tery na manja mahafatifaty ianao, noho izany dia soso-kevitra tsara ny haka mitaingina lava roa aloha alohan'ny hieritreretanao azy akory, kitiho ny lasely miakatra na midina amin'ny fiakarana kely amin'ny, hoy, roa hatramin'ny telo mil. Farany, tsy maintsy tadidina ity bisikileta ity. Ny Fitting dia zavakanto toy ny siansa ary tsy tena mila harahina mafy.
Torolàlana hafa momba ny fomba fiasa. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny crank fohy kokoa? Eny, ho malama kokoa ny dian'ny pedalantsika ary antenaina fa hahomby kokoa izy. Izy ireo koa dia hanampy antsika hitazona gadona ambony kokoa.
Ary koa, izy ireo dia hanampy antsika hisoroka ny teboka maty izay eo an-tampon'ny fikotrananay amin'ny pedal eo anelanelan'ny 11 sy 2 ora. Raha manana lohalika, valahana, na fanaintainana ambany ianao, dia mety hidika izany fa lava loatra ny cranks anao. Ka io dia mety ho fanitsiana haingana an'ity olana ity ary tsy misy porofo kely milaza fa ireo mpitaingina lehibe kokoa dia hiharan'ny ratra noho ny famindrana ireo cranks fohy ireo.
Tena tonga amin'ny resaka fampiononana na ilay hevitra tsapa, izay noresahiko teo aloha, fa ny mpitaingina lava kokoa dia mila manana lavaka lava kokoa. Tsy fantatro momba anao izao, fa amin'ny maha olona nitaingina crank 172.5 mil mahazatra ahy fotsiny satria efa nitaingina bisikileta foana aho dia mahatsiaro ho diso fanantenana tamin'ny hevitra fa ny fanapahan-kevitra noraisina indrindra dia fohy kokoa foana crank.
Raha misy aminareo efa za-draharaha na efa nanafoana ny fikotrananany, azafady apetraho amin'ireo hevitra etsy ambany izy ireo. Te handre momba izany aho. Manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity, ka azafady tsindrio ny bokotra 'thumbs up' toy izany.
Aza adino, tsindrio izao tontolo izao hisoratra anarana sy hahazoana ny lahatsoratra hafa rehetra ananantsika. Ary raha te-hijery lahatsoratra momba ny mekanika hazakazaka ianao dia azonao atao eto, ary eto ny toro-hevitra momba ny bisikileta.
Tsara kokoa ve ny sandry fohy kokoa?
Crankny halavana dia azo ampiasaina ho fitaovana homanatsaraolana mifandraika mifanentana misy fiatraikany amin'ny fampiononana, hery ary aerodinamika. Mifindra any acrank fohy kokoaafakamanatsara: Fampiononana: Acrank fohy kokoany halavany dia mampihena ny fivezivezena eo amin'ny lohalika (fanitarana sy fihoarana), andilana ary lamosina ambany.
fanazaran-tena kettlebell ho an'ny abs
Inona ny halavan'ny crank tsara indrindra?
Miankina amin'ny haavon'ny atleta sy ny ranjonyhalavan'ny,halavan'ny crankny 162.5mm-167.5mm dia mety (ny triathletes avo indrindra sy lava indrindra dia mety mila mankany 170mmcranks). Malagasycranks, mifanaraka amin'ny bisikileta mahazatra 'ivelan'ny talantalana', dia 172.5mm-175mm ho an'ny ankamaroan'ny haben'ny bisikileta afa-tsy ny zana-kazo kely kokoa.30 apr 2018
Hatraiza ny lanjan'ny crank sandry?
Halavan'ny crankny fanovana dia mety hanampy amin'ny famahana ny fanaintainana sy fanaintainana lava, saingy mandaitra indrindra izany rehefa manao ny zavatra rehetra tokony hatao ianao mba hatanjaka amin'ny bisikileta. Manova ny filanjana azy io. Raha miova ianao amin'ny faranyhalavan'ny crankarm, hanova ny fitaovanao io koa.5 feb 2016
Misy heriny eo amin'ny fahefana ve ny halavan'ny lavarangana?
Manolotra izany ny Folk lorelavaka crankmanana goavanavokatryamin'nyfahefanaazonao atao ny mamorona, na ny cadence azonao ampitaingina. Mifanohitra amin'izany, lava kokoacranksMakà fotoana bebe kokoa hamerenana sy hanerena ny taham-pandeha ambany kokoa, saingy afaka mamokatra tsela avo kokoa.
Tsara kokoa ve ny sandry an-doha lava kokoa amin'ny fiakarana?
Cranks lava kokoamanome tombony bebe kokoa sy ny fahaizanapedalfitaovana lehibe kokoa noho ny fitoviana rehetra. Toy izany koacranksamin'ny bisikileta. Tena ilaina amin'ny havoana iorehefa niakatra, rehefa manosika ny revolisiona miadana kokoa isika ary mazava ho azy fa sarotra kokoa ny manosika fitaovanarehefa niakatra.21 mart 2003
Tsara kokoa ve ny cranks lava kokoa na fohy kokoa?
nyhalavan'ny lavaka fohy kokoaho an'nyfohyNy triathlete dia hanome ny tombony rehetra etsy ambony sy bebe kokoa, satria ny fampihenana kely dia hamporisika aambonycadence mamonjy ny tongotr'izy ireo amin'ny hazakazaka. Ny toerana fisotroana aero ambany dia azo tanterahina satria ny fanarahana lohalika eo an-tampon'ny fikorotanana diakokoa.2 aogositra 2016
Inona ny halavan'ny volo MTB tsara indrindra?
Tahirycranks, matetika tonga amin'ny 175 na 170mm, miasa tsara ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​saingy misy tombony ho an'ny lava na fohy kokoahalavan'ny crankarakaraka ny fisiolojika sy ny fomba mitaingina ny mpitaingina.3 Aogositra 2020
Inona no mahasamihafa ny cranks 170mm sy 175mm?
Raha ny 170 izao dia 'fohy' 172.5mm dia 'ara-dalàna' aryCranks 175 mmdia tena fahita. Na izany aza, nyfahasamihafana eo amin'ny 170 mm sy 175mmdia latsaky ny 3% ary ny halavan'ny tongotr'ireo mpitaingina bisikileta dia samy hafa lavitra noho izany.
Ahoana no fiantraikan'ny halavan'ny crank amin'ny hafainganam-pandeha?
elacrankmidika hoe kely ny hery ilaina amin'ny pedal fa tongotra ambonyhafainganam-pandehahitazomana ny cadence (ny faribolana iray indraydialehibe kokoa) ary ny zoro eo amin'ny valahany dia mety hanjary olana. Raha manampy nify amin'ny rojo vy ianao rehefa mampihena nylavaka crankary mitazona ilay gadona mitovy amin'izany ianaodiamiadana kokoa.20 desambra 2013
Mandra-pahoviana ny cranks amin'ny bisikiletako?
Ny halavan'ny lavakamifanitsynyelanelananyivon'nynyfonosana ambany arynyivon'nynypedal axis.nyny halavany mahazatra indrindra dia 170, 172.5 ary 175 mm, fa azo atao ny mahitacrankseo anelanelan'ny 165 sy 180 mm aonytsena.15 Jul. Feb 2020
Aiza no ahitako fampahalalana momba ny halavan'ny sandan'ny crank?
Raha liana te hianatra bebe kokoa ianao dia zahao ity loharano tena tsara ity izay mampiseho ny asan'ny fikarohana nataon'i Jim Martin sy Steve Elemer momba ny taha pedal, ny halavan'ny crank, ny teknikan'ny pedaling ary ny rojo tsy misy boribory. Loharanom-pitaovana tena tsara iray hafa koa ity torolàlana avy amin'ny Bike Dynamics, mpitaingina bisikileta ao Leamington Spa, Warwickshire, UK ity.
Inona no mahasamihafa ny cranks fohy indrindra sy lava indrindra?
Tamin'ny fandinihana voalohany natao, dia nisy 2-5% fotsiny ny fihenan'ny herinaratra teo anelanelan'ny halavany, rehefa nampiasa ilay crank 120mm fohy indrindra sy 225mm lava indrindra ny atleta. Tamin'ny fanadihadiana iray hafa momba ny refin'ny halavan'ny crank hatramin'ny halavan'ny tongotra, ny atleta dia nahita fihenan'ny herin'ny 4% teo anelanelan'ny 120mm sy 220mm lava.
Ahoana ny fandrefesanao ny halavan'ny crankset?
Ny bearings dia potserina ao anaty kaopy ambany fonosana. Rehefa refesina ny halaviran'ny ampinganinao raha ampiasaina amin'ny fononteny ambany Wheels Mfg, refeso ny halaviran'ny ampela avy amin'ny tarehy anatiny amin'ny sandry lava iray hatramin'ny faran'ny ampela. Esory daholo ny spacer crank sy ny mpanasa onja raha misy izany.